Adihevitra – Kandidà A. Naina: « Aoka hanara-dalàna sy hipetraka amin’ny toerany » | NewsMada
Adihevitra – Kandidà A. Naina: « Aoka hanara-dalàna sy hipetraka amin’ny toerany »
Niatrika ny adihevitra nifanaovana tamin’ireo mpirotsaka hofidina ben’ny Tanàna miisa efatra mpifaninana aminy ny kandidà Andriantsitohaina Naina, omaly tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna, Analakely. Nitondrany ny heviny sy ny tetikasany ireo lohahevitra maro tamin’izany. Mazava ny nambarany amin’ny ankapobeny. « Aoka isika hanara-dalàna ary hipetraka amin’ny toerany avy ny tsirairay… Ilaina ny fanarahan-dalàna ialana amin’izao fahapotehana sy fahalotoana ary korontana samihafa eto izao… », hoy izy. Anisan’ny vahaolana nentiny ny fanalana ny fako eny anivon’ny fokontany, iarahana amin’ny RF2. Homena fitaovana izy ireo ary hampitomboina ny tambin-karamany. Hapetraka koa ny dabam-pako madinika, mialoha ny hahatongavan’ny fako any amin’ny dabam-pako lehibe. « Azo ampiasaina havadika angovo ho an’ny herinaratra izany… Maherin’ny 100 ireo fokontany hitako fa feno fako avokoa ny lalana sy ny lakan-drano nefa tsy hitan’ny sasany », hoy izy.
Drafitra ho an’ny fitaterana sy ny fifamoivoizana
Momba ny tsena sy ny mpivarotra kosa, nambarany fa tsy natao hakana vola ireny sehatra ireny. « Halamintsika izany. Hampiana satria maro ireo mivelona amin’izany… Betsaka ireo tsena tsy feno akory. Ampiakarina ny tsena efa eo ary hatao “parking” ny ao ambany. Harindra sy alamina ny fivarotana… Mampilamina ny mpivarotra sy ny mpiantsena na ny fifamoivoizana ary ny sisin-dalana izany. Samy amin’ny toerany ny rehetra…”, hoy izy. Mifandraika amin’izany koa ny fifamoivoizana. Manana vahaolana ny kandidà Andriantsitohaina Naina ka anisan’izany ny drafitry ny fitaterana. Tsy mandany volabe ary efa tao efa ela izany, saingy tsy nisy nampihatra… Amboarina ireny lalan-tokana ireny… “Hampiharina ny lalàn’ny fifamoivoizana. Hampiana ny fotodrafitrasa. Miara-miasa fa tsy mifaninana ny polisy kaominaly sy ny polisim-pirenena”, hoy ny kandidà laharana fahefatra.
Aoka izay ny fitiavan-tena…
Homena “moto” izy ireo ary ampitomboina ny lamandy amin’ny tsy fanarahan-dalàna ka hahazo tambiny ireo mpitandro filaminana, tsy ho tonga amin’ny kolikoly. “Sazina na iza na iza tsy manara-dalàna..”, hoy izy tamin’ny ampahan’ny fanehoan-keviny.
Nialoha izany, nihaona amin’ny vahoakan’ny boriborintany III, teny Ankorondrano Andranomahery ny tenany sy ireo mpiara-dia aminy. Nasongadiny fa tonga ny fotoana hamerenana ny jiro, ny filaminana, ny fahadiovana sy hampandrosoana ny tanàna. “Aoka izay ny fitiavan-tena. Vonona isika ny hitantana. Mila fanampianareo vahoaka aho amin’izany ka tongava mifidy an’Andriantsitohaina Naina sy ireo mpanolotsaina”, hoy izy.